February 12, 2013 by Angus Shaw in Biology / Ecology
In this photo taken Thursday, Jan. 24, 2013 an unidentified man holds a red claw crayfish at a local fish shop in Harare, Zimbabwe. Scientists in Zimbabwe say a fresh water crayfish brought from Australia is breeding out of control in the northern Lake Kariba, devouring the food sources of other fish and putting the nation's entire aquatic ecosystem at risk. Officials at the Zimbabwe University lakeshore research station say the red claw crayfish, introduced a decade ago for a fish farming project, has no natural predators in the wild crocodiles don't like them and they produce clusters of eggs up to half the size of a tennis ball that hatch prolifically. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
(AP)—Scientists in Zimbabwe say a fresh water crayfish brought from Australia is breeding out of control in the northern Lake Kariba, devouring the food sources of other fish and putting the nation's entire aquatic ecosystem at risk.
Officials at the Zimbabwe University lakeshore research station say the red claw crayfish, introduced a decade ago for a fish farming project, has no natural predators in the wild—crocodiles don't like them—and they produce clusters of eggs up to half the size of a tennis ball that hatch prolifically.
"Zimbabwe faces crayfish crisis in water ecosystem" February 12, 2013 https://phys.org/news/2013-02-zimbabwe-crayfish-crisis-ecosystem.html